योगाकै लागि टपलेश बनिन् यी ईच्छाधारी नागिन !! – ताजा समाचार
योगाकै लागि टपलेश बनिन् यी ईच्छाधारी नागिन !!
चर्चित टिभी सिरियल ‘नागिन’ बाट चर्चामा आएकी टिभी अभिनेत्री आशका गोराडिया अहिलेको समय आफ्नो योगा पोजका कारण चर्चामा छन् । केही समयअघि अभिनेत्री आशका आफ्नो पोल डान्सका कारण चर्चामा आएकी थिइन् । त्यस्तै अहिले आएर आफ्नो योगा पोजेजका कारण उनी भाइरल बनिरहेकी छन् । भर्खरै मात्र अभिनेत्री आशकाले आफ्नो टपलेश तस्वीर सोसल मिडियामा सेयर गरेकी छन् ।
तस्वीर आशका समुद्र किनारमा काठको फल्याकबाट बनाइएको ड्याकमा बसिरहेकी छन्, जहाँ आफ्नो दुवै हात पछाडिपट्टी फर्काएर जोडेकी छन् । तस्वीरमा एक्लै देखिएकी आशकाले आनन्द लिइरहेकी छन् । आशकाको सोही तस्वीर अहिले सोसल मिडियामा भाइरल बनिरहेको छ ।
अभिनेत्री आशकाले सेयर गर्ने जुनसुकै तस्वीरहरुले फ्यानहरुले राम्रो प्रतिक्रिया दिदै आएका छन् । आशकाको ब्याकलेश तस्वीर पनि भाइरल बनिरहेको छ । आशकाले आफ्नो करियरको सुरुवात २००२ मा सिरियल ‘अचानक ३७ साल बाद’बाट सुरु गरेकी थिइन् । यसक ासाथै उनले सुपरटिक सिरियल ‘कुसुम’, ‘गेट सेट गो’, ‘सिन्दुर तेरे नामका’, ‘विरुद्ध’, ‘नागिन’ लगाएतमा काम गरिसकेकी छन् ।
प्रकाशित भएको : September 14th, 2019